Tag Archive for "आयोग" - संविधान च्यातेर फ्याँकिने जोखिम !
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजविन आयोग गठन हुन नसकेको होइन, सरकारले नचाहेको हो । यी आयोगहरू सरकारद्वारा गठित हुने भएपनि न्यायालय जत्तिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर दुवै आयोगका गठनमा माओवादी युद्धका हर्ताकर्ताहरू हावी भइदिनाले काम ठप्प छ । सत्यनिरुपण आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको छानविनमा अहिले पूर्ण विराम लागेको छ । ‘... थप पढ्नुहोस्
जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लङघनकर्ताहरूलाई विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन एक दशकभन्दा अघि नै माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि नेपाली अधिकारीहरूले एक जिवन्त, लोकतान्त्रिक र खुला समाज निर्माण गर्ने... थप पढ्नुहोस्
अब को बन्छ होला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ?
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त ईला शर्माले दुई हप्तापछि अवकाश पाउने भएका छन् । उनीहरुको अवकाशपछि आयोगको प्रमुख आयुक्त को बन्ने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ । क्रमशः सुधिर शाह, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलमध्ये एकजना प्रमुख आयुक्त बन्ने निश्चित् छ । स्रोतका अनुसार पौडेल कांग्रेसनिकट भएकाले उनको प्रमुख आयुक्त बन्ने सम्भावना छैन । शाह र दाहालमध्ये एकजना प्रमुख ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सर्वसाधारणको भिड हुने सरकारी कार्यालयमा अख्तियारले सेवाग्राहीको भेषमा ‘जासुस’ खटाउने भएको छ । छिटो सेवा प्रवाहका नाममा घुस लिने कर्मचारीलाई सुधार्न आयोगले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । मालपोत, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका कार्यालयमा आयोगबाट गोप्य रुपमा कर्मचारीलाई सेवाग्राहीलाई भेषमा खटाउन लागिएको हो । केही दिनमै यो कार... थप पढ्नुहोस्
किन भयो संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक स्थगित ?
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक स्थगित भएको छ । आइतबार आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो । आजको बैठकले मधेसी र थारु आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षहरूको सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची थियो । संवैधानिक परिषद्ले मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त र थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसअघिको बैठकमा सुनुवाई भएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा प... थप पढ्नुहोस्
पहिलो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया शुरु
पोखरा । सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको काम अघि बढाएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेकोे बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै आयोग गठन प्रक्रिया शुरु भएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख... थप पढ्नुहोस्
२९ असार, काठमाडौं । भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको नाइनएन–एआइबी जे विमान ‘अपरेसनल फेलियर’ का साथै मानवीय कमजोरी भएका कारण दुर्घटना भएको दुर्घटना जाँच आयोगले ठहर गरेको छ । विमान अवतरण गर्ने क्रममा विमानको विभिन्न पार्टपूर्जाले काम नगरेको र ककपिटका चालकबीच राम्रो समन्वय नभएकाले विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटना भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आन्तरिक उडानका क्र... थप पढ्नुहोस्